I-china iron oxide yellow 311/313/920 abakhiqizi nabaphakeli | I-Shencai Pigment
1. I-Iron oxide pigment ephuzi isetshenziswa ngqo kusimende njenge-pigment noma i-colorant kwimikhiqizo ye-precast neyokwakha kokhonkolo ohlukahlukene. Izinhlobonhlobo zezindawo zikakhonkolo ezinemibala yangaphakathi nangaphandle, njengezindonga, phansi, uphahla lwensika, izinsika, imipheme, imigwaqo, izindawo zokupaka, izitebhisi, iziteshi, njll. amathayili, imabula yokufakelwa njalonjalo. 2. I-iron oxide pigment ephuzi ilungele zonke izinhlobo zokufaka umbala ngopende nezinto zokuvikela, kufaka phakathi ingaphakathi lamanzi elingaphandle nangaphandle, izindwangu zempuphu, njll. Kungasetshenziswa nopende wamathoyizi, upende wokuhlobisa, upende wefenisha, upende we-electrophoretic futhi Uqweqwe lwawo. Izinsimbi zombala ze-Iron oxide zilungele ukufaka imibala kwimikhiqizo yepulasitiki, efana ne-thermosetting polymer ne-Thermoplastic, nemikhiqizo yenjoloba, efana namashubhu angaphakathi ezimoto, amashubhu angaphakathi endiza, amashubhu angaphakathi ebhayisikili, njll. 4. Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwemabula yokwenziwa, umbala weterrazzo. I-Watercolor, umbala kawoyela, upende, injoloba nezinye izingulube. Isetshenziswa njengesixhumanisi sombala we-iron oxide pigments, njengokwenza i-iron oxide red, i-iron emnyama, njll. Ngaphezu kwalokho, i-iron oxide pigment ephuzi nayo ingasetshenziselwa zonke izinhlobo zezimonyo, iphepha, umbala wesikhumba.
“SHENMING” brand synthetic powder pigment iron oxide yellow 313 ithokozela idumela eliphezulu emakethe futhi imikhiqizo ithengiswa kahle ezweni lonke.
Uma unesithakazelo ekuthengeni ikhwalithi ephezulu yensimbi ye-pigment iron oxide ephuzi 313 evela eChina, ISIJIAZHUANG SHENCAI IFENSI YOKUPHEPHA kuyisinqumo sakho esingcono kakhulu.
Igama Lokuhweba INSIMBI NGAPHANDLE OKUPHUTSHANE
Inkomba yombala I-pigment yellow42 (77492)
I-CAS No./EC Cha 20344-49-4 / 243-746-4
Imininingwane Okuqukethwe (Fe2O3) % ≥86
Ukumuncwa kawoyela ml / 100g 25 ~ 35
inani le-pH 3 ~ 7
Amandla adonsela phansi athile g / cm3 4.1
Ukupakisha kokuthengisa Esikhwameni esingu-25kg / esikhwameni esingu-600kg ngobuningi bese kufakwa izinkuni
Langaphambilini iron oxide obomvu 110/120/130/180/190
Olandelayo: I-iron oxide emnyama 722/750